Ama-Emulators ahamba phambili wePS4 weWindows PC (2020) - Ama-Softwares
Uhlela ukuthola i-PS4 kodwa ungenayo isabelozimali salokho, kepha unayo iPC?Ngemuva kwalokho ungakhathazeki ngemuva kocwaningo olunzulu size nohlu lwe-Best PS4 emulators ongadlula kuzo futhi uzitholele eyodwa ukuze ukwazi ukujabulela izihloko zokudlala ze-Play Station kwi-PC yakho.
Ngakho-ke nika lokhu okuthunyelwe ukufundwa okuphelele ukuze wazi ukuthi iyiphi i-emulator ye-PS4 ehamba phambili.
Uhlu lwe-Best PS4 Emulator ye-PC - Ama-Emulators Wobufakazi Besikhathi Esizayo
I-Orbital PS4 Emulator.
Ubonile lo eza. I-PS4 i-emulator ethandwa kakhulu futhi esetshenziswa kakhulu ngenxa yesikhulumi sayo esiqinile nezici ezikunikezayo.I-PS4 Emus ine-server exhunywe ku-inthanethi ebamba imidlalo eku-inthanethi ku-PS4. Ungathola le midlalo kusistimu yakho futhi uyidlale ungaxhunyiwe ku-inthanethi.
I-PS4 Emus Futhi ine-interface elula kakhulu yomsebenzisi ekuvumela ukuthi uthole uhlelo lwakho lwe-BIOS ngaphandle kokungena kuzilungiselelo ezithuthukile. Uzothola nenketho yokwenza ushintsho oluthile kanye nama-tweaks ku-emulator yakho ngokuya ngokuthanda kwakho. I-PS4 Emus iyatholakala kubasebenzisi beWindows, Mac, iOS, ne-Android. Ungalanda i-PS4 Emus ngokuchofoza lapha .
Isibonisi esisebenziseka kalula.
Usekela imidlalo eminingi.
Isebenzisa imemori encane yekhompyutha.
Ayisekeli i-PlayStation Network.
2.I-Orbital PS4 Emulator
Okulandelayo ohlwini, sine-Orbital PS4 Emulator. I-orbital emulator ye-PS4 isoftware esezingeni eliphansi ezosebenzisa uhlelo lwe-PS4 console ku-PC yakho. I-emulator ye-PS4 okungenani izodinga ubuncane be-16GB ye-RAM kwi-PC yakho futhi izosebenza kuphela kwi-PC enokucushwa okuphezulu. Le simulator isakhiwa ngonjiniyela futhi kungenzeka ukuthi ayisekeli ezinye izihloko zemidlalo zentengiso ze-Play Station Store.
I-orbital PS4 emulator ingasetshenziswa ku-Windows naku-LINUX kuphela. Kepha ukusebenzisa lokhu, kuzofanele wakhe izinto ezintathu ze-BIOS, GRUB, QEMU wedwa. Ungalanda ikhodi yomthombo ngokuchofoza lapha .
I-Windows ne-Linux ziyahambisana.
Idinga ukucushwa okuphezulu ukuze kusebenze.
I-PCSX4 iyisemulator entsha nesha ye-PS4 ekhuphuka emakethe. I-PCSX4 Ikhululekile ukusebenzisa uhlelo oluzolingisa kalula noma yimuphi umdlalo we-PS4 kudeskithophu yakho. I-PCSX4 isebenzisa i-Vulkan, i-OpenGL, ne-x eqondile ku-backend Ukulethwa okuphezulu kokusebenza ngokuya ngemidlalo.
I-PCSX4 Futhi idinga i-PC esezingeni eliphezulu equkethe i-12 GB ye-RAM ne-processor eyi-4 eyisiqalo, no-64 bit Windows operating system. Ngokulandwa okungaphezulu kwama-350,000+ i-PCSX4 kusesigabeni sayo se-beta futhi ungathola izimbungulu namaphutha ngenkathi uyisebenzisa. Ungalanda le emulator ngokuchofoza lapha .
Abafelokazi ne-Mac bayahambisana.
Ayisekeli amageyimu aphangiwe.
Ayisekeli ama-32-bit Windows OS.
4. I-PS4 EMX
I-emulator ye-PS4 EMX yathuthukiswa emuva ngo-2014 ngabathuthukisi beqembu legesi. Kusukela ngaleso sikhathi i-PS4 EMX isakhiwa futhi iqembu liyasebenza, kusixhumi esibonakalayo somsebenzisi seWindows. Izimangalo ze-PS4 EMX ziletha ukusebenza okuhle kakhulu ngokuya ngemidlalo uma une-PC esezingeni eliphakeme equkethe iprosesa yakamuva, i-Minimum 6 GB RAM, ne-GPU ezinikele.
Izinsizakalo zePS4 EMX kulindeleke ukuthi ziqale kabusha maduzane. Ungalanda le emulator ngokuchofoza lapha .
Kumahhala ukulanda nokufaka.
Kutholakala kuphela kubasebenzisi beWindows.
Yebo, lokhu bekungukuthunyelwe kwethu okufushane ku-Best PS4 emulator. Uma ukuthandile okuthunyelwe futhi uhlela ukuzilanda ngokwakho bese usazisa ukuthi iyiphi i-emulator ozoyilanda ebhokisini lokuphawula elingezansi, futhi uma unesiphakamiso noma imibuzo ephathelene nokufanayo bese ubashiya esigabeni sokuphawula.
Kuhle Emulators Android
Ingabe Ama-Bluestacks Kuphephile Ukuwasebenzisa?